Mpg waa mid ka mid ah isticmaalka qaab file jir xogta video. Mpg waa tiro ka mid ah kororsi file u MPEG-1 ama MPEG-2 audio iyo video riixo. MPEG-1 Qaybta 2 video waa dhif maalmahan, iyo dheereynta caadi ahaan waxaa loola jeedaa durdur wax barnaamijka Mpg ama MPEG. Sababta kaliya file ah waa la siiyey "Mpg" kordhin yahay sababtoo ah hababka file ka weyn iyo nidaamyada hawlgalka ku xaddidan yihiin 8.3 filenames- in uu yahay, 8 warqado, muddo, iyo kordhinta saddex warqad ... kiiskan, Mpg inta badan isticmaalaa file badaley ka cajalad VHS ama VCD ciyaartoyda.
On MP4 gacanta kale waa dambeeyay oo si ballaaran u isticmaali qaab video adduunka oo dhan. MP4 isticmaalaa MPEG 4-riixo taas oo ah foomka sare / updated ah MPEG-1 riixo farsamo.
Haddii aad qabto ah ciyaaryahanka VCD jir ah oo aad u doonayaa inaan ciyaaro aad video on ama qalab kasta oo kale kaas oo keli ah file Mpg, ka dibna aad leedahay si loogu badalo aad MP4 video qaab Mpg.
Part1: MP4 Best Si Mpg Video Converter
Part2: Aqoonta Extended u MP4 iyo Mpg
Badanaa Converter video kaliya taageeraa qaab fashion ka hor iyo dhawaan, laakiin waxaa jira ah Converter video cajiib ah loo yaqaan " Wondershare Video Converter Ultimate ". Iyada oo software waxa aad u bedeli karaan ku dhawaad ​​qaab kasta oo multimedia in qaab kasta oo aan la xadidayn u socdeen.
Wondershare Video Converter Ultimate Taageertaa qaab Mpg tayada HD oo badalo kartaa HD video galay Mpg la eber tayada khasaaro. By isticmaalaya farsamo ka hor barbardhigo "Madax-ilaa-Head" waa 30 jeer ka dhakhsi badan Converter kale. "Wondershare Video Converter Ultimate" 159 qaabab ay taageerayaan oo ay ku jiraan ugu dambeeyay 4K video qaab iyo qalab la qaadi karo ay taageerayaan. Ay ka mid yihiin diinta video, ka dib waa qaababka ugu muhiimsan ee ugu weyn ee software this.
Halkan waa liiska astaamaha ka dhigi cadcad ka mid ah dhammaan dadka isticmaala iyo xirfadlayaasha Wondershare Video Converter Ultimate:
• Beddelaan 159 video format ay ka mid yihiin 4K iyo 3D. 30x soomi video diinta.
• taageero DLNA dhisay-in. Bedelka video cable USB aan.
• Edit, In kor loo qaado, iyo shakhsiyeeyo Media. Samaynta DVD la menu iyo template.
Sida loo Beddelaan MP4 in Mpg Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate
Wondershare Video Converter Ultimate Ee gui (User Interface Garaafka) laftiisa waa user saaxiibtinimo. Idinkuna ma loo baahan yahay khibrad IT waayo,. Iyadoo aqoon asaasi ah oo aad u badalo kartaa adigoo.
Iyada Maqaalkan waxa aan sii kaa caawin ku saabsan MP4 in Mpg diinta la talaabo talaabo ay ka mid yihiin habka Screenshot.
Tallaabada 1 MP4 Add File
Sida software waxaa ka mid ah hawlaha badan oo kale, hubi in aad ku jirto suuqa kala saxda ah
Guji "Beddelaan" (Jaantuska 1).
Markaas riix batoonka "Faylal ay dar" loogu daray faylasha aad rabto in aad si loogu badalo
Ka dib markii click on "Add Files" daaqad yar oo ka muuqan doona
Laga soo bilaabo halka aad dooran kartaa in aad video baahan yahay ama videos
Wixii badan xulashada saxaafadeed "Control" dooro in ka badan hal file
Ka dib markii aad doorato files guji "Open" button
Hadda waxaad arki kartaa dhammaan faylasha aad soo xulay qaab beddelidda,
Tallaabada 2 Dooro Mpg sida aad Output Video Qaabka
Riix hoos "Qaabka Output"
Dooro "Qaabka", "HD" Iyo "HD Mpg"
Ama waxaad ka raadin kartaa qaab wax soo saarka aad loogu baahan yahay
Ka dib markii doorashada files waxa aad doorataa sida aad doonayso inaad qaab video saarka kaliya guji "Beddelaan" button
l All aad suxuufiyiinta bilaaban doono diinta hal mar ama "diinta Dufcaddii"
Marka lagu sameeyey, oo aad ka heli kartaa faylasha la gediyay adigoo gujinaya "Folder Open"
Description Mpg waa kordhin file u animation MPEG ah ee MPEG-1 AMA MPEG-2 codec ah. MPEG-1 waxaa loogu talagalay sireed horumar video heerar ah oo ku saabsan 1.5 milyan oo jajabkii hadhay halkii labaad yara. Waxaa si gaar ah loogu talagalay Video-CD iyo warbaahinta CD-i. MPEG-1 lakabka-3 audio (MP3) ayaa sidoo kale ka yimid shaqo hore MPEG.
MP4 waa kordhin files multimedia, kaas oo ah qaab weel oo keydin karta oo video, audio iyo xogta Cinwaan (iyo sidoo kale in ka badan ku xiran tahay content) a. MP4 isticmaalaa MPEG 4-riixo, heer ee ay soo Guuritaanka Picture Khubarada Group (MPEG). Waxa uu noqday sayniska dheeraad ah oo ku caan ah dukaamada sida Lugood isticmaalaa qaab weel tan, oo loo isticmaalo la iPod iyo Playstation la qaadan karo (PSP) sida dhisay taageero, files MP4 waxay noqdeen in ka badan oo caan ah.
VLC ciyaaryahan warbaahinta, WinDVD, Media Player Classic, Wondershare Player
MIME Type Video, Guuritaanka-image, Sound, Aggregate, Video, Guuritaanka-image, Sound, Aggregate,
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Mpg
Sida loo Split Mpg Yaryar Files
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan MP4 in Mpg la Loss Tayada Zero